Ihe nkuzi asaa maka ire ere na oge nke E-Azụmaahịa | Martech Zone
E-Azụmahịa na-ewere ụlọ ọrụ na-ere ahịa site na nkeji. Ọ na-eme ka o sikwuoro ya ike idobe brik na ngwa agha na-ese n’elu mmiri.
Maka ụlọ ahịa brik na-ngwa agha, ọ bụghị maka ịchekwa ngwa ahịa na ijikwa akaụntụ na ire ahịa. Y’oburu n’inwe ulo ahia n’ile aru, igacho iru n’ebe ozo. Nye ndị ahịa ahụ ihe na-akpali akpali Ihe kpatara ya ka ha jiri oge ha gbadata n’ụlọ ahịa gị.
1. Nye Ahụmahụ, Ọ Bụghị Nanị Ngwaahịa
Enwere ọtụtụ ihe na ụlọ ahịa brik na ngwa agha karịa ịnwe ngwaahịa anụ ahụ na ire ere. Nye ha ahụmịhe na ihe kpatara iji laghachi n’ụlọ ahịa gị. Ọ bụ ya mere ihe na ọzọ echiche ụlọ ahịa na-na-traction ma na-ewuru onwe ha oghere.
pụọ bụ otu ụlọ ahịa echiche dị otú ahụ na Soho. Lee ị nwere ike ịzụ ahịa maka ngwaahịa njem. Ọnụ ụzọ abụọ nke ụlọ ahịa ahụ na-eche dị ka ụlọ ahịa abụọ dị iche iche na-asọrịta ibe ha.
Gbanwee Ka Mma
Lọ ahịa anụ ahụ gị enweghị ike ịlele otu maka ọtụtụ afọ, ma ọ bụ ọnwa. A na-enye ndị ahịa ọtụtụ data na-achọghị ahịa na ntanetị. Gbanwe ọdịdị na mmetụta nke ụlọ ahịa gị kwa oge na-enye ezigbo ịkwanye ụkwụ na ahịa n'ikpeazụ.
Na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa na imepụta na nhazi, yana ngwaahịa ị na-ere. Lọ ahịa gị nwere ike irite uru site na atụmatụ dị ka kalenda ọdịnaya maka azụmaahịa dijitalụ.
Akụkọ nke bụ ụlọ ahịa na New York. Storelọ ahịa ahụ na-arụzigharị onwe ya ma na-adịkarị ọhụụ kwa ọnwa. A ọhụrụ isiokwu ọ bụla ọzọ ọnwa agwa imewe na ika uru. Ọ na - emekwa ka onye ahịa mara ihe dị na ọrịre ma kọọrọ gị ihe omume emere na ọnwa ahụ. Ahịa ha abawanye okpukpu abụọ karịa afọ 2 gara aga.
2. Jikọọ Ndị Mmadụ
Zinghazi ihe omume bụ ụzọ ọzọ iji dọta ndị ahịa. Klaasị ahụ ike, ọmụmụ ihe, ebe obibi, akwụkwọ akwụkwọ na mmemme mmekọrịta ndị ọzọ bụ ụzọ magburu onwe ya iji kpalie mmasị.
Chamber bụ ọhụrụ boutique na New York nke na-enye nanị mmachi mbipụta na pụrụ iche ọrụ nkà na imewe. Ha kwadoro oriri abalị na mmekorita ya na PIN-UP magazine n'oge Design Miami. Nke a na-enyere aka iwulite obodo ma duga ndị ahịa na-abụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe.
3. Otu ndi Okike bu ihe kwesiri
Inye ahụmahụ ma ọ bụghị naanị ngwaahịa na-ewe ihe okike. Nye ndi otu okike na ahia ahia ka mkpa kariri. Gbaa mbọ hụ na ị nwere ọdịnaya dị mma. Gbaa mbọ hụ na edobe ya iji bawanye ahịa. Nke a na-eme ka ika gị dị ọhụrụ.
Nwee Obi Ike Ma Gbalịa Ihe Ọhụrụ
Ewebata echiche ohuru, ma tinye ihe edere edebe n’ime ihe. Were ihe ọghọm gbakọọ ma mee amụma banyere data nyocha.
4. Gbado anya na Mmekorita Ndị Ahịa
Akụkụ pụrụ iche nke ụlọ ahịa brik-n-mortar bụ uru iji zute ma metụta ndị ahịa ozugbo. Kedu ihe weebụsaịtị na-agbasi mbọ ike ime, iji ihe osise ndị okike mara mma na ide ihe na-eme ka mmadụ kwenye, enwere ike iji ihu ọchị ọchị na aka aka gị. Trainingzụ ndị ọrụ gị iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa nwee ezigbo ọmarịcha ma nwee obi ụtọ maka ndị ahịa nwere ike ịkwalite ahịa gị n'ụzọ dị ukwuu. Ozugbo inwere ndị ahịa ugboro ugboro ị nwere ike ịchọta mmasị ha ma rụọ ọrụ dabara na ya.
5. niclọ ahịa Omnichannel Na-eme Atọ ahụ
E-azụmahịa na-esiwanye ike na asọmpi egwu. Site na ndị Refeyim dị ka amazon, eBay, na Alibaba ka ịmalite dị ka Boxed, Nyochaa, na Slack, ọ bụ ahịa siri ike ịsọ mpi.
E-azụ ahịa e-commerce na US bụ buru amụma na ọ ga-eto site na ijeri US $ 396.7 na 2016 ruo ihe karịrị ijeri US dolla 684 na 2020. Ọ bụ ezie na ahịa ịntanetị ka na-anọchite naanị obere akụkụ nke ire ahịa mkpọsa niile - ihe dịka 8.4%. 42% nke ndị ọrụ inntanetị na USA zụrụ ihe n'ịntanetị ọ dịkarịa ala otu ugboro n'ọnwa.
Akwụkwọ na eletrọniki bụ ọkacha mmasị maka ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. E-azụmahịa dị na ọkwa ebe usoro ọhụụ anaghị arụ ọrụ. Niclọ ahịa Omnichannel bụ ụzọ kachasị mma maka ya.
Shoppingzụ ahịa ahịa bụ usoro na-esote n'ịzụ ahịa e-commerce. Na 2016, a na-eme atụmatụ na ihe ruru ndị ọrụ nde 136 zụtara opekata mpe otu ugboro site na ngwaọrụ mkpanaka ha. Onu ogugu a bu ihe ruru nde 162.8 site na afo 2019. O buru na ibu onye na ere ahia na e-commerce, nweta ngwa n'oge na adighi anya.
6. Jiri Uru Gị
N'adịghị ka ụlọ ahịa anụ ahụ, anaghị egbochi oke e-commerce site na mbara ala. Yabụ iji ụdị ike azụmahịa a na-eme ihe ngosi.
Biakwa obibia nke data nchịkọta bụ ihe ọma nye e-commerce nke na-eme azụmahịa n'ụzọ dị ịtụnanya n'ọtụtụ ụzọ. Nchịkọta data nwere ike ịkwalite ụlọ ahịa E-commerce na ngalaba ndị a:
Njikwa njikọ mbufe: data maka ngwaahịa malite n'ụlọ nkwakọba ihe na onye ahịa.
Nchọpụta aghụghọ / ahịa ndị ahịa: Enwere algọridim nke mere ka ndị ahịa buru amụma wayo ma zere ha.
Ahịa Analytics: Ndị na-ere ntanetị n'ịntanetị na-achọkarị ụzọ ọhụụ iji gbasaa. Iji tọọ ọnụahịa ziri ezi ma e jiri ya tụnyere uru ahịa, nke a na-abata n'aka.
Ahịa Optimization: Mejuputa atumatu onu ahia n'ofe otutu ntaneti ntaneti. Ọ na-eme nke a site na usoro akpaghị aka nke na-emeghachi omume na ahịa na ndị na-asọmpi na ntinye aka mmadụ. Ndị ọrụ dịka ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi ewepụtala teknụzụ site na iji data buru ibu metụtara ọgụgụ isi asọmpi na nyocha ọnụahịa na igwe na ọgụgụ isi.
Na-atụ aro Systems: Vnyagharị site na ụlọ ahịa na a mebere gburugburu ebe obibi chọrọ ezi ije. Usoro ndị a tụrụ aro na-arụ dị ka ụkpụrụ maka nke ahụ.
Nkọwapụta Ngwaahịa: Patternschọta usoro n'etiti ịzụ na nchọgharị na-eme omume bara uru maka e-azụmahịa iji melite katalọgụ ngwaahịa na ahụmịhe onye ọrụ.
Nchịkọta Ahịa n'ịntanetị: Nke a na-arụ ọrụ na bidding maka mgbasa ozi na Google. Ha na-eduga njikarịcha ma nwekwuo ọnụ ọgụgụ pịa-site-na ọnụego na ntụgharị ntụgharị.
7. Eledala Okwu Ọnụ anya
Inwe ndị ahịa gị ihe dị mma banyere gị n’ebe ndị enyi ha nọ dị ike. Gbaa mbọ hụ na ị naghị eleda ya anya. Nye ha ezigbo ahụmịhe ma chọpụta ụzọ iji hụ na ị na-eche echiche ha gbasara gị dị ka nke ọma dị ka o kwere mee.
Ndị na-ede blọgụ na ndị mmekọ mmekọ
Ahịa ọdịnaya bụ usoro ugbu a na mgbasa ozi. Gbasaa akara gị site na ọdịnaya ma ọ bụ na ọ nwere ike ịda n'azụ.
Iji influencers na ndị na-ede blọgụ bụ ụzọ dị mma iji ruo ndị na-ege gị ntị. Ọ na-adọrọ uche n'emeghị ka ụda olu ahịa. Mgbakwunye ahịa bụ ụzọ ọzọ maka ịgbasa mmetụta gị n'ịntanetị.
Inwe ọnụnọ n'ịntanetị bụ ihe dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ n'ihu na azụmahịa e-commerce. Ndị ụlọ ọrụ ugbu a na-ewepụta ihe dịka $ 2.4 nde kwa nkeji site na e-azụmahịa. Site na nke ahụ, ihe karịrị $ 40,000 funnels na Facebook, Twitter, na Pinterest
Millennials nọ na elu mgbe ọ na-abịa afọ demographics mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Lee anya ma daa ụda na-adọrọ mmasị ndị na-ege gị ntị na mgbasa ozi mgbasa ozi
Enwere ọtụtụ usoros ị nwere ike ịgbaso maka ịre ahịa mgbasa ozi mmekọrịta. Chọpụta ihe bụ nhọrọ na ihe na-arụ ọrụ maka gị. Nke ahụ bụ ụzọ kachasị mma iji mee ka azụmaahịa gị na-aga nke ọma.
Tags: Alibabaamazonkụrụ ọkpọuloonye nleleNchọpụta Wayo Ndị Ahịammekọrịta ndị ahịae-azụmahịaebayn'ọdịnihuNchịkọta ahịaOnye ahia ahia ojooNew Yorkomnichannelomnichannel mkpọsaNchịkọta Ahịa n'ịntanetịỌnụahịa OptimizationNkọwapụta NgwaahịaNa-atụ aro Retail Systemsịzụ ahịa ahịaslackSocial Media MarketingAkụkọ nkeNjikwa njikọ mbufeokwu onu
Frida Cooper bụ onye na-eme nyocha nchịkọta ụlọ ahịa ihe dị ka afọ ise.
Kedu ihe dị mma SEO? Lee ihe omumu
Otu Purmechapu aha ndị debanyere aha anyị mụbara CTR site na 183.5%